Indlela yokulahlekelwa isisindo ... Ingxaki engunaphakade yobuntu bethu. Kodwa ukuba kwixesha elifudumele iikhilogram ziphela nje, ke ebusika akulula nzima ukunciphisa umzimba, kodwa iipounds ezongezelelweyo zifakiwe. Indlela yokulahlekelwa isisindo ebusika, ukuze kungenzeki? Kukho imithetho ebalulekileyo ebalulekileyo.
Ebusika, umzimba udinga amandla amaninzi ukutshisa umzimba kwaye igcinwe kwiifomthi ezinamafutha. Ngoko musa ukuhamba malunga nawe kunye nendlala yakho! Oku akuthethi ukuba ufanele uhlale kwindawo yokulamba indlala. Yidla, kodwa ngokumodareyitha.
I-Detologs inqanda ukuhlala kwiidlo ngexesha lobusika. Kodwa ukuba unqumle ukulandela le ndlela, khetha ukondla, ukuze ungafaki kwindlela ngenxa yokungabi namandla.
Ukuze ulahleke ngokufanelekileyo ubunzima ebusika, kubalulekile ukuhlaziywa kwishedyuli yokuphila yonke kwaye uqiniseke ukuba ungene kwimidlalo. Makube ngumsebenzi ongenatyala okanye iiyure ezingama-2 zokuqeqeshwa ngamandla kwi-gym, kodwa kuyimfuneko nje. Kuya kuba mnandi ukubhalisela umdaniso: ulwandle lwengqondo evelele, kunye nokulahlekelwa ngokwaneleyo kweekhalori ngenye imini.
Isondlo esifanelekileyo ebusika
Ngexesha lebusika, imenyu yolungelelaniso iya kukuvumela ukuba ulahlekelwe isisindo kakuhle. Kuya kuba mnandi ukuba uthathe isobho esishushu njengesiseko. Isobho esinomso siya kukufudumala kwaye unike iivithamini, izondlo, amandla. Imfesi ifanelekile kukuba iyakhohlisa umzimba wakho ngenxa yevolumu yokudliwa. Le ndlela yokugqibela ayisuswanga ngokukhawuleza emzimbeni njengamanzi alula. Kwaye kunye kunye nemifuno ephekiweyo-yinto yokutya e-calori ephantsi.
Uhlobo lokuqala lwesobho:
Thatha isaphetha (iintloko ezi-6), iifologi zeklabishi, i-pepper eluhlaza kunye neetatyiti (iziqhekeza ezi-2-3 nganye), isiqwenga sesitshalo se-celery. Zonke izithako zicoliwe kwaye ziphekwe. Emva kokubilisa iqabunga, i-ginger kunye nepepper.
Uhlu lwesibini lwesobho:
Sithatha umbala weklabishi kunye nama-eeks (0.2 kg), 0.5 ngee-anyanisi entloko, iklabishi, iparsley kunye ne-kroti (0.25 kg nganye) kunye ne-0.3 kg ye-tuberries tuber. Yonke inqunywe kwaye ibilise ide iphekwe. Emva koko, ukwenza amazambane ahlambulukileyo, faka i-clove e-garlic, ijusi yetamatato (1 isipuni), ibhasil kunye nepelepele ukunambitha. Le isobho iphekwe enye imizuzu eyi-10.
Ngokombono wezondlo, kungcono ukunciphisa ubunzima ebusika ngokunciphisa isabelo esidliwe. Ukungabandakanyi nayiphi na imikhiqizo evela ekudleni ebusika ayimkelekanga. Ngeli thuba umzimba usuphelile, kwaye ukungabikho kwezixhobo eziyimfuneko kuya kuthintela imeko yomzimba. Kubalulekile ekudleni kokufumaneka kweentlanzi, iimveliso zobisi, amaqanda. Ukusuka ekudleni, ukhethe intaka ephilileyo (inkukhu, inkukhu), inyama yenkomo okanye inyama yengulube kufuneka ibe inyanzelekile. Imifuno kunye neziqhamo ziyanyanzelekile, kwaye inani labo kufuneka linyuswe. Zama ukutya okunempilo. Ukuba ngaphambi kwakho konke ukugcoba, ngoku yisikhathi sokupheka ukutya ngendlela yokukhupha, ukupheka okanye ukupheka nje ehovini. Kuya kuba kuhle ukufumana umqhubi - gcina ixesha elininzi kunye nomgudu. Ngokuphathelele i-carbohydrate, qiniseka ukuba uquka iphariji ekudleni kwakho. Kodwa krazula ukutya okutya kunye neesekese ezahlukeneyo.
Ukukhethwa ngokuchanekileyo ukutya, ukuzivocavoca, umnqweno kunye nokuthanda amandla - oku konke okufuneka ulahlekelwe isisindo ebusika okanye ubuncinane ugcine ubunzima bakho kwizinga elinye.
I-Gymnastics yomgudu ngokwemigaqo yePilates
Indlela yokunciphisa umzimba ngokulula naphakade
Indlela yokukhetha i-goose kwimarike
IHoroscope ngenyanga yeJanuwari, ingonyama
Inkondlo yeNkomo entsha yonyaka, iinqwenela
Umama ucinga ukuba umfana wam uhlaza